Alshabaab oo waxbadan kabadalay fikirkii ay aaminsanaayeen muddo kahor “Dowladda waa lala shaqeyn karaa”. – Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
HomeFaalloyinkaAlshabaab oo waxbadan kabadalay fikirkii ay aaminsanaayeen muddo kahor “Dowladda waa lala shaqeyn karaa”.
Alshabaab oo waxbadan kabadalay fikirkii ay aaminsanaayeen muddo kahor “Dowladda waa lala shaqeyn karaa”.
August 8, 2019 marqaan Faalloyinka, Soomaliya, Wararka maanta 1
Isbadal ku Yimid Hab Fikirka Alshabab?
Akhriso:- Shaki badan oo laga qabo qaabkii loo dilay Eng.Yariisoow iyo dhaawiciisi la dhamaystiray.
DAAWO VIDEO:Fanaanka Axmed Rasta oo Magaaladu Ku Dhashay Si Cajiib Loogu Soodhaweeyey
Waxaas waxa ka dambeeya,, waa ragga iyaga argagixisada Barlamaanka Federaalka u fadhiya, oo hadda la ogaadey,arrimahaay wadaan, ee ka soo horjeeda nabadeynta Somaliya, hadda waxa gashay baqdin, markii god kasta lala galay, yaan la dhegeysan hala tirtiro.